ဆံသားလေးများကို အမြဲတမ်းနူးညံ့ပြီးတောက်ပြောင်နေစေ - Chelmo News Portal
၀၁. ခေါင်းအလွန်အမင်းလျှော်ခြင်းကို ရှောင်ပါ
ဆံသားတွေကို အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ခေါင်းကိုမကြာခဏ မလျှော်ဖို့ပါပဲ။ ဆံသားလေးတွေကို နေ့စဉ် လျှော်ဖို့မလိုအပ်သလို အထူးသဖြင့် ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ပိုသတိထား သင့်တယ်နော်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ့လိုလျှော် တာကို ရပ်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ကိုယ့်အထင်ကတော့ အဲဒီလို ခေါင်းကို ခေါင်းလျှော်ရည်တွေနဲ့ နေ့စဉ် လျှော်တာဟာ ဆံသားကို ပိုမိုသန့်ရှင်းစေတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်နော်။ သို့ပေမယ့် အဲဒီ လိုပြုလုပ်နေခြင်းဟာ ဦးခေါင်းအရေပြား ကို ခြောက်သွေ့စေနိုင်တယ်နော်။ နေ့စဉ်ခေါင်းလျှော်ခြင်းကို အကျင့်ဖြစ်နေပြီဆိုလျှင်တော့ မလုပ်ဖို့တော့ တိုက်တွန်းပရစေ။
၀၂. ဆံကေသာတွေအတွက် ထုတ်ကုန်များကို ရွေးချယ်တတ်ပါစေ။
ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာ လျှော်ရမယ့်ခေါင်းလျှော်ရည်ကို သေချာဂရုစိုက်ရွေးချယ်ပါ။ ဆပ်ပြာများ၊ခေါင်းလျှော် ရည်များနှင့်သွားတိုက်ဆေးများ အစရှိတဲ့အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Sodium Laurel Sulfate (သို့မ ဟုတ်) Sodium Laureth Sulfate မပါဝင်တဲ့ ထုတ်ကုန်များကိုရှာပါ။ သဘာဝမှ ထုတ်လုပ်ထားသောပစ္စည်းများကို ရွေးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆံကေသာအတွက် တချိန်က စိတ်ပူခဲ့ရတာတွေ လျှော့နည်းစေပြီး အားပြည့်စေမှာပါ။ ခေါင်းလျှော်ပြီးရင်တော့ အစိုဓာတ်ပိုမိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဆံပင်ပျော့ဆေးနဲ့ ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးပါ။ ဆံပင် ကောက်ခြင်းကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် leave-in conditioner ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်နော်။ ခေါင်းလျှော်ရည် အသုံးမပြုတဲ့ နည်း လမ်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ဦးခေါင်းအရေပြားထဲမှာ သဘာဝအဆီဓာတ်ဟာ အစိုဓာတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် တခြားဆံပင်ပျော့ဆေးတွေ မလိုအပ်တော့ပါဘူး။
၀၃. ဆံသားတွေကို အခြောက်ခံပါ။
ဆံသားတွေခြောက်သွေ့နေရင်တော့ တီရှပ်အဟောင်းတစ်ထည်နဲ့ ဆံပင်တွေကို ဖွဖွလေးသုတ်ပေးပါ။ ဆံ ပင်လေးတွေကို အဲဒီလိုပြုလုပ်ပေးပြီးရင် ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ လေမှုတ်စက်နဲ့ ဆံပင်ကိုအခြောက်ခံပေးပါ။ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် အချိန်ပိုမိုပေးရပေမယ့်လဲ ပြင်းထန်တဲ့ လေပူတွေနှင့် အခြောက်ခံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း အကြံပြုပရစေ။ အလားတူပဲ အပူပေးထားတဲ့ ဆံပင်အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ( ဥပမာ-ဆံပင်ဖြောင့်၊ ဆံပင်ကောက်တဲ့ သံချောင်းတွေ)ဟာ ဆံသားတွေကို အလိုအလျှောက်ခြောက်သွေ့စေနိုင်တာကြောင့် အသုံးပြုခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစား ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၀၄. ဦးခေါင်းကို ခေါင်းလိမ်းဆီလိမ်းပေးပါ။
ခေါင်းလျှော်ခြင်းနဲ့ ဆံသားတွေကို အခြောက်ခံခြင်းအပြင် ခေါင်းလိမ်းဆီများလိမ်းပေးခြင်းဟာလဲ ဆံကေသာတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိုဓာတ်ကို ရရှိနိုင်ပါတယ်နော်။ ဆံသားအမျိုးစားနဲ့ သင့်တော်မယ့်ဆီမျိုးကိုလိမ်းကြည့်ပါ။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းဟာ ဆံသားတွေကို ခေါင်းလိမ်းဆီအနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) အုန်းဆီအနည်းငယ်ကို လက်ဖဝါး ထဲထည့်ပြီး ဆံသားအဖျားလေးတွေကို ပွတ် လိမ်းပေးခြင်းဟာလဲ လွယ်ကူပါတယ်နော်။ (သာမန်ထက်အစိုဓာတ်ကို ပိုမို လိုအပ်နေရင်တော့ ဦးခေါင်းကို နှိပ်နယ်ပေးခြင်းပြုလုပ်ပေးပါ။) စာရေးသူအတွေ့အကြုံအရ ရေချိုးပြီးမှဆံသားတွေကို ဆီလိမ်းမည်ဆိုလျှင် ဆံသားတွေဟာ အရမ်းကိုချော်ချွတ် ချွတ်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်။ အဲ့တာကြောင့် ရေမချိုးခင် ဆီနဲ့ ဆံသားတွေကို နှိပ်နယ်ပေးပြီး ခဏတာ ဆီနဲ့ ပေါင်းထားပေးပြီးမှ ခေါင်းလျှော်သင့်တယ်နော်။ ဆံသားတွေကောက်နေတာကို ပျောက်ကင်းစေဖို့ တခြားနည်းလမ်းကတော့ ရေချိုးပြီးမှ အနည်း ငယ် လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်နော်။
ပါးစပ်နံသော ပြသာနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ